Call Blocker - လူမည်းစာရင်း & True Caller ID ခေါ်သူ Android အတွက်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » blocker Call - နာမည်ပျက်စာရင်း & စစ်မှန်သော Caller ID ကိုတောင်းဆို
blocker Call - နာမည်ပျက်စာရင်း & စစ်မှန်သော Caller ID ကို APK ကိုတောင်းဆို
blocker Call စစ်မှန်တဲ့ခေါ်ဆိုသူ၏အိုင်ဒီဖော်ထုတ်နှင့်ဖုန်းနံပါတ်များကိုပိတ်ဆို့ခြင်းများအတွက်အကောင်းဆုံး App ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းသန်းပေါင်းများစွာသောအသုံးပြုသူများယုံကြည်စိတ်ချ blocker Call! ရိုးရှင်းသော, ထိရောက်သောနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည် (ကြော်ငြာမပါ!) ။
blocker ကိုအလိုအလျောက် Spam တွေကို, telemarketers နှင့် robocalls ထံမှဖုန်းနံပါတ်ပိတ်ဆို့ထားလိမ့်မည်ကိုခေါ်ပါ။ သင်တို့သည်လည်းခေါ်ဆိုမှုများနာမည်ပျက်စာရင်း အသုံးပြု. ဖုန်းခေါ်ပိတ်ဆို့နိုင်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးဖုန်းနံပါတ်ဒေတာဘေ့စနှင့်အတူ, ဘီလီယံနှစ်ခုကျော်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုယနေ့အထိပိတ်ဆို့။
★ခေါ်ရန် blocker - မီးမောင်းထိုးပြထားသည်
●အလိုအလျောက်ပိတ်ဆို့ Spam တွေကိုနှင့် telemarketers
★ Caller ID ကို - အင်္ဂါရပ်များ
စစ်မှန်သော Caller ID ကိုရှာပါ
- Caller ဖော်ထုတ်ခြင်း & အရေအတွက်ကိုသတ်မှတ်ခြင်း။ ရီးရဲလ်အချိန်ကခေါ်ဆိုသူ၏အရေအတွက်အားဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်မျက်နှာပြင်အပြည့်ခေါ်ဆိုသူ၏အိုင်ဒီ tool ကိုနဲ့တူအလုပ်လုပ်တယ်, ခေါ်ဆိုသူကိုဖေါ်ထုတ်။ စစ်မှန်တဲ့ခေါ်ဆိုသူ ID ကိုငါသိ၏။
- ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအမည်ပျက်စာရင်းမှသူတို့ကိုထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် Block ဖုန်းနံပါတ်များ, မလိုချင်တဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများနှင့်အဆက်အသွယ်။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးကိုစပမ်ခေါ်ဆိုခ blocker နှင့် robocall blocker တူသောအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ဒါဟာအစမှအဆင့်မြှင့်ဒေတာဘေ့စပေးပါသည်။ spam များကိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှု & မသိသောနံပါတ်များကိုပိတ်ဆို့ရန်အစမတ်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု blocker ကိုအသုံးပြုဖို့မေ့လျော့မနေပါနဲ့!
- သင်ကြိုက်သလောက်သင်အမြဲပိတ်ဆို့ထားပြီးသူကိုတွေ့နိုင်ပါသည်ရှိရာ, ထို "နာမည်ပျက်စာရင်း" ကိုမဆိုလိုချင်သောနံပါတ်များကိုထည့်ပါ။ အများအပြားခေါ်ဆိုခပိတ်ဆို့ခြင်းနဲ့ options ပိတ်ဆို့ခြင်း SMS ဖြင့်လွယ်ကူသောခေါ်ဆိုခ blocker နှင့် SMS ကို blocker app ကို။ သင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုမှာ Modes သာ Blocking အကွိမျမြားစှာ။
စမတ်ခေါ်ဆိုမှု Log in ဝင်ရန်
- လော့ဂ်ကိုပဌနာတစ်ဦးချင်းစီကနေစစ်မှန်တဲ့ခေါ်ဆိုသူ ID ကိုသိပါ! Caller ID ကိုငါ့ကိုခေါ်တော်မူသောပြသထားတယ်။ မကြာသေးမီကဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအားလုံးကိုခေါ်ဆိုမှုသမိုင်းကိုကြည့်ပါ။ အဆိုပါလွဲချော်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု, ပြီးစီးခဲ့အဝင်အထွက်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုမရှိအဖြေကိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအပါအဝငျ။
- အကောင်းဆုံးဖုန်းနံပါတ် lookup ပြုလုပ်နေ & ဖုန်းနံပါတ်ရှာဖွေရေး reverse! တစ်ဦးအကျိုးရှိစွာလမ်းအတွက်မဆိုဖုန်းနံပါတ်ရှာပါ။ သင်တို့သည်လည်း log သို့မဟုတ်အမြန်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများအတွက်သမိုင်းကိုပဌနာကိုရှာဖွေမခေါ်ရှုမြင်စေနိုင်သည်။
- ခေါ်ရန်သတိပေးချက် spam များကိုဖုန်းခေါ်ဖို့နှုတ်ဆက်ပြောတစ်ခုလွယ်ကူပြီးအခမဲ့လမ်း, သင်မသိသောဝင်လာသောဖုန်းနံပါတ်များကိုဖော်ထုတ်ရန်ကူညီပေးသည်ပံ့ပိုးပေး!
- သင်သည်ထိုသို့သောအစညျးအဝေးမြား, တရားဝင်ဖြစ်ရပ်များသို့မဟုတ်ညအချိန်တွင်အဖြစ်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု, ခံယူချင်ကြပါဘူးတဲ့အခါမှာအလွယ်တကူအချိန်စာရင်း။
ဒီ app အနည်းငယ်သာ memory နဲ့ CPU ကိုအရင်းအမြစ်များကိုကုန်ကျ-အလင်းမာန်တင်းနှင့်တည်ငြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ spam များကိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုရပ်တန့်ရန်ယနေ့ Download!
blocker သင်သည်စစ်မှန်သောခေါ်ဆိုသူ ID ကိုကူညီရှာဖွေအလိုအလျောက်မလိုချင်တဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုပိတ်ဆို့နိုင်ပါတယ်ခေါ်ဆိုပါ။ သငျသညျကိုစပမ်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများကအာရုံပြီ, သို့မဟုတ်သင်မည်သူမဆိုထံမှဖုန်းခေါ်ဆိုမှုပိတ်ဆို့ဖို့လိုလျှင်, သင်ရုံအမည်ပျက်စာရင်းမှအရေအတွက်ကိုထည့်ခေါ်ရန် blocker အလုပ်ပြုစေနိုင်လျှင်။
blocker app ကိုပြုလုပ်အများပြည်သူသို့မဟုတ်ရှာဖွေစေရန်သင့်ဖုန်းစာအုပ် upload တင်မထားဘူးကိုခေါ်ပါ။
သင်သည် app အကြောင်းကိုမဆိုမေးခွန်းများရှိပါကကျွန်တော်တို့ကိုအသိပေးပါ။
blocker Call - နာမည်ပျက်စာရင်း & စစ်မှန်သော Caller ID ကိုတောင်းဆို
Grus Group မှ